မိန်းကလေးတစ်ယောက်ထဲဆိုပြီး ကားပေါ်ကနေဆင်းကာအပြစ်ရှာဆဲဆိုခဲ့တဲ့ အမျိုးသားရဲ့ အဆုံးသတ်မလှခဲ့တဲ့အဖြစ် - Mckzone Daily
လူတစ်ချို့က မ်ိန်းမငယ်လေးတွေတစ်ယောက်တည်း ကားမောင်းနေမယ်ဆိုရင် စချင် ၊ နောက်ချင်ကြပြီး အချို့ဆိုရင်တော့ ရန်ရှာဆဲဆိုပြီး နှောက်ယှက်ချင်ကြပါတယ် ။ အချို့ဆိုရင်လည်း လမ်းကျပ်လွန်းတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင် စိတ်မရှည်လို့ဆိုပြီး ဒေါသရှေ့ထားပြီး ရန်ရှာတတ်ကြပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြမဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံက အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုမရှိဘဲ လမ်းမပေါ်မှာ အခြားကားတစ်စီးမှ မိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်ကို အပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့လို့ 4ရက်ကြာသည်အထိ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ် ။
ဖြစ်စဉ်ကတော့ အသက် 22. နှစ်အရွယ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးဟာ ကားမောင်းနေစဉ် အသက် 61 နှစ်အရွယ် အမျိုးသားကြီးတစ်ယောက်က ကားနှင့်ဘေးချင်းကပ်လိက်လိုက်ပါလာပြီး လက်ဟန်အမူအယာတွေနဲ့ ကောင်မလေးကိုဆဲဆိုခဲ့ပါတယ် ။ ထို့နောက် မကြာခင်မှာပဲ သူ၏ကားကို ကောင်မလေးရဲ့ကားရှည့်တည့်တည့်ပိတ်ရပ်ပြီး ကားပေါ်ကနေဆင်လာကာ ကောင်းမလေးရဲ့ကားပုတင်းပေါက်ကို အတင်းဖွင့်ခိုင်းခဲ့ပါတယ် ။ ထို့နောက် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီး ကားမှန်တံခါးပေါ် တံတွေးထွေးချပစ်ခဲ့တဲ့အပြင် သူမရဲ့ကား ဘတ်မှန်ကိုပါရိုက်ချိုးပစ်ခဲ့ပါသေးတယ် ။
ကောင်မလေးကတော့ အကြောင်းမဲ့အပြစ်တင်ရန်ရှာခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကို video ရိုက်ကူးထားပြီး ချက်ချင်းပဲရဲစခန်းသို့တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ် ။ အဆိုပါအမျိုးသားမှာတော့ သူ၏လုပ်ရပ်အတွက် ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် 4ရက်ခန့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ် ။
လူတဈခြို့က မိနျးမငယျလေးတှတေဈယောကျတညျး ကားမောငျးနမေယျဆိုရငျ စခငျြ ၊ နောကျခငျြကွပွီး အခြို့ဆိုရငျတော့ ရနျရှာဆဲဆိုပွီး နှောကျယှကျခငျြကွပါတယျ ။ အခြို့ဆိုရငျလညျး လမျးကပျြလှနျးတဲ့နရောတှမှောဆိုရငျ စိတျမရှညျလို့ဆိုပွီး ဒေါသရှထေ့ားပွီး ရနျရှာတတျကွပါတယျ ။ ဒီတဈခေါကျဖျောပွမဲ့ မလေးရှားနိုငျငံက အမြိုးသားတဈဦးဟာ စိတျရှညျသညျးခံမှုမရှိဘဲ လမျးမပျေါမှာ အခွားကားတဈစီးမှ မိနျးမငယျလေးတဈယောကျကို အပွဈတငျရနျရှာခဲ့လို့ 4ရကျကွာသညျအထိ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခွငျးခံခဲ့ရပါတယျ ။
ဖွဈစဉျကတော့ အသကျ 22. နှဈအရှယျ တက်ကသိုလျကြောငျးသူလေးဟာ ကားမောငျးနစေဉျ အသကျ 61 နှဈအရှယျ အမြိုးသားကွီးတဈယောကျက ကားနှငျ့ဘေးခငျြးကပျလိကျလိုကျပါလာပွီး လကျဟနျအမူအယာတှနေဲ့ ကောငျမလေးကိုဆဲဆိုခဲ့ပါတယျ ။ ထို့နောကျ မကွာခငျမှာပဲ သူ၏ကားကို ကောငျမလေးရဲ့ကားရှညျ့တညျ့တညျ့ပိတျရပျပွီး ကားပျေါကနဆေငျလာကာ ကောငျးမလေးရဲ့ကားပုတငျးပေါကျကို အတငျးဖှငျ့ခိုငျးခဲ့ပါတယျ ။ ထို့နောကျ စိတျဆိုးဒေါသထှကျပွီး ကားမှနျတံခါးပျေါ တံတှေးထှေးခပြဈခဲ့တဲ့အပွငျ သူမရဲ့ကား ဘတျမှနျကိုပါရိုကျခြိုးပဈခဲ့ပါသေးတယျ ။
ကောငျမလေးကတော့ အကွောငျးမဲ့အပွဈတငျရနျရှာခံခဲ့ရတဲ့အဖွဈအပကျြကို video ရိုကျကူးထားပွီး ခကျြခငျြးပဲရဲစခနျးသို့တိုငျကွားခဲ့ပါတယျ ။ အဆိုပါအမြိုးသားမှာတော့ သူ၏လုပျရပျအတှကျ ဖမျးဆီးခွငျးခံခဲ့ရပွီး စုံစမျးစဈဆေးမှုအတှကျ 4ရကျခနျ့ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခွငျးခံခဲ့ရပါတယျ ။
ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကို Animation ရုပ်ပုံတွေအဖြစ် ပုံဖော်ပြခဲ့သူ
သူများတွေထက် ကွဲပြားခြားနားအောင် မင်္ဂလာပွဲကို လူနာတင်ကားနဲ့အဆန်းထွင်ပြီးရောက်လာခဲ့တဲ့ သတို့သမီး (ရုပ်သံ)